Aqoonta - Delta Engineering Belgium
Kariifka "Aqoonta Aqoonta"
12 sababood oo lagu booqdo Maramures
Isniin, 27 Abriil 2020 by Injineer Delta
Tuesday, April 30 2019 by Carla Van der Straeten
Liiska meelaha la heli karo, garoomada diyaaradaha ee dhow.
Published in Garoomada, Uncategorized
Xidhmada Banaynta: Isku duub si fiican u ah dhalooyin bac ah oo ku jira dawooyinka ama agagaaraha cuntada
Arbaco, 30 Maarso 2016 by Injineer Delta
Delta Injineerinka waxay sameysay nidaam alxanka cusub mashiinnada bacdeena, taasoo keentay in bacaha si aad ah loo adkeeyay, oo la jaan qaada DIN EN 11607-1. Qaabkani wuxuu wax ka tarayaa tijaabinta bacaha biyo biyo leh.
Published in Baashid
Warqad jaridda dhalada
Axad, 24 Luulyo 2016 by Danny De Bruyn
Isku-habeynta, nidaamka iyo tilmaamaha qaabeynta ee soosocda mashiinada Delta Engineering Trimming soo socda:
Mashiinadan waxaa loogu talagalay jaridda dhalooyinka leh furitaanka ROUND.
Published in Gariirinta
Jimco, 25 Maarso 2016 by Injineer Delta
Heerarka Ingiriiska waa heerar ay soo saarto BSI Group oo lagu daro Xeerka Axdiga (oo si rasmi ah loogu magacaabay Hay'adda Heerarka Qaranka (NSB) ee Boqortooyada Midowday)).
Published in Heerarka Mashiinka